PEACEFUL PA: June 2013
12. How the Believer Can Know God’s Will (BREAD FOR BELIEVERS) ဘုရားအလိုတော်ကို သိအောင် ရှာနည်း
“ညီအကိုတို့၊ အသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာ၊ သန့်ရှင်းခြင်းလက္ခဏာ၊ ဘုရားသခင် နှစ်သက်တော်မူဘွယ်သော လက္ခဏာနှင့် ပြည့်စုံသောယဇ်ကို သင်တို့သည် ပူဇော်၍၊ မိမိကိုယ်ခန္ဓာကို ဘုရားသခင်အား ဆက်ကပ်ခြင်းတည်းဟူသော သင်တို့ပြုအပ်သောဝတ်ကို ပြုမည့်အကြောင်း၊ ဘုရားသခင်၏ ကရုဏာတော်ကို ထောက်ထား၍၊ သင်တို့ကို ငါတိုက်တွန်း နိုးဆော်ပေ၏။ သင်တို့သည် လောကီ ပုံသဏ္ဍန်ကို မဆောင်ကြနှင့်။ ကောင်းမြတ်သောအရာ၊ နှစ်သက်ဘွယ်သောအရာ၊ စုံလင်သောအရ တည်းဟူသော ဘုရားသခင် အလိုတော်ရှိသောအရာသည် အဘယ်အရာ ဖြစ်သည်ကို သင်နိုင်မည်အကြောင်း၊ စိတ်နှလုံးကို အသစ်ပြင်ဆင်၍ ပုံသဏ္ဍာန် ပြောင်းလဲခြင်းသို့ ရောက်ကြလော့။” ရောမ ၁၂း ၁-၂။
သင်းအုပ်အဖြစ်နဲ့ ၂၁ နှစ်လောက်လုပ်တော့ အကြံဥာဏ် လာတောင်းတဲ့သူတွေ မကြာခဏ ရှိတယ်။ “အသက်တာအတွက် ဘုရားအလိုတော်ကို ဘယ်လိုလုပ် သိနိုင်မလဲ?” လို့ မေးတတ်ကြတယ်။
လူငယ်တရားဟောဆရာ ဘဝတုန်းက ဘုရားအလိုတော် သိပ်သိချင်ခဲ့တယ်။ ဝိညာဉ်ကယ်တင်တဲ့ အသင်းတော်ကြီး တည်ထောင်ချင်တယ်။ ဒါပေမယ့် “ဒီဆန္ဒဟာ ဘုရားပေးတဲ့ ဆန္ဒလား? ငါပဲ နာမည်ကြီးချင်နေတာလား?” လို့ မေးမိတယ်။ ဘုရားဖြစ်စေချင်ရင်တော့ လုပ်မယ်လို့ စိတ်ပိုင်းဖြတ် ထားတယ်။
အောင်မြင်တဲ့သူ ဆိုတာ ဘုရားအလိုတော်ကို ရှာတွေ့ပြီး၊ အလိုတော်အတိုင်း လုပ်ဆောင်သူပါဘဲ။ Dr. Bob Jones, Sr., က အယူသည်း ကယ်လ်ဗင်းနစ်စ် တယောက်ရဲ့ အမေးကို ဖြေတဲ့အခါ ဘုရားအလိုတော် အရေးကြီးပုံကို ပြောပြခဲ့ဖူးပါတယ်။ “ဘုရားသခင်က ငါ့ကို ငရဲ သွားစေချင်ရင်၊ ငါကောင်းကင်ကို မသွားဘူး။ အလိုတော်မရှိဘဲ ကောင်းကင်မှာနေမယ့်အစား အလိုတော်နဲ့အညီ ငရဲမှာပဲ သွားနေချင်တယ်။ အလိုတော်အတိုင်း ငရဲမှာနေရင်၊ ငရဲဟာ ကောင်းကင်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်။”
အလိုတော်သိဖို့ သိပ်အရေးကြီးတယ်ဆိုရင်၊ ဘယ်လို သိခွင့်ရနိုင်မလဲ? ရောမ ၁၂း၂ က - “ကောင်းမြတ်သောအရာ၊ နှစ်သက်ဘွယ်သောအရာ၊ စုံလင်သောအရာတည်းဟူသော ဘုရားသခင် အလိုတော်ရှိသော အရာသည် အဘယ်အရာဖြစ်သည်ကို သင်နိုင်မည်အကြောင်း …”
အလိုတော် ရှိ- မရှိ သိနိုင်ပါတယ်။ ဘုရားသခင်ကို သိအောင် ပြောဖို့ မလိုပါဘူး။ ဘုရားသခင် သိပြီးသားပါ။ မှန် မမှန် သက်သေပြမယ် ဆိုရင် ကိုယ်တိုင်ကိုသာ သက်သေပြဖို့ လိုပါတယ်။ အသက်တာအတွက် ဘုရားအလိုတော် သေချာစွာ သိနိုင်မယ့် အချက်တွေ ပြောပါမယ်။
(၁) ကိုယ့်ဘဝအတွက် တိကျတဲ့ ဘုရားအလိုတော်၊ ရည်ရွယ်ချက် တခုရှိတယ်လို့ နားလည်ပါ။
Realize that God hasavery definite purpose and will for your life
ဘုရားအလိုတော် ရှာဖို့ ကြိုးစားတဲ့အခါ ပထမအချက်က ယုံကြည်သူတိုင်းရဲ့ အသက်တာအတွက် တိကျတဲ့ ဘုရားအကြံအစည်၊ ရည်ရွည်ချက်တခု ရှိတယ်လို့် နားလည်ထားဖို့ လိုပါတယ်။ ခရစ်ယာန်အသက်တာဆိုတာ လေမှာလွင့်တဲ့ ဂွမ်းပွင့်ကလေးလို၊ ဦးတည်ရာမရှိ၊ အကြောင်းမဲ့ လွင့်နေရတာမျိုး မဟုတ်ဘူး။ ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်။ ပန်းတိုင်ရှိပါတယ်။
ဒါကို နားလည်ရင် ခရစ်ယာန်အသက်တာဟာ စိတ်ဝင်စားစရာ သိပ်ကောင်းတယ်။ အဓိပ္ပါယ်လည်း သိပ်ရှိတယ်။ အရေးကြီးတဲ့ လုပ်ငန်းအတွက် ဘုရားအလိုတော် ရှာရာမှာ ဘုရားအလိုတော် ရှိတယ်လို့ မသိသေးဘဲနဲ့ ဘယ်သူ ပျော်ရွှင်နိုင်မလဲ? တခုခုကို ရှာဖွေရင်၊ အဲဒီအရာ တကယ်ရှိတယ်၊ ဖြစ်မယ်ဆိုတာ မသိဘဲနဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုဆိုတာ ရှိနိုင်မလား?
ငယ်ငယ်တုန်းက ငါးမျှား သွားဖူးတယ်။ သိပ်တော့ မမျှားတတ်ပါဘူး။ စိတ်ပျက်လွယ်တယ်။ သိပ်သည်းမခံနိုင်ဘူး။ နည်းနည်း ကြာလာရင်၊ ဒီကန်မှာ ငါးမရှိဘူးလို့ သတ်မှတ်ပစ်လိုက်တယ်။ ငါးမျှားတံကို ဘေးမှာချရင်း တောအုပ်ထဲမှာ ပြေးကစားချင်နေပြီ။
“တယောက်ယောက် လာကူပါဦး၊ ငါးကြီး မိနေပြီဟေ့” လို့ အော်သံ ကြားရရင်တော့ အရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားတယ်။ ရေကန်စပ်ကို ပြေးသွားတဲ့အခါ သူငယ်ချင်းတယောက် ၅ ပေါင်လောက်ရှိတဲ့ ငါးကြီး တကောင်ကို ဆွဲတင်နေပြီ။ အဲဒီအခါကျမှ ငါးမျှားတယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ရှိလာတယ်။ စိတ်ဝင်စားလာပြန်တယ်။ ပျင်းချိန်မရတော့ဘူး။ ငါးစာတပ်ပြီး ငါးမျှားတော့တယ်။ အခုတော့ ဒီကန်မှာ ငါးရှိတယ်ဆိုတာ သေချာသွားပြီကိုး။
ကိုယ့်ကို ဘုရားသခင် စိတ်ဝင်စားကြောင်း စဉ်းစားမိလာတဲ့အခါ အံ့ဩစရာ ကောင်းလာတယ်။ မဿဲ ၁၀း၃၀ မှာ “သင်တို့ဆံပင်သည်လည်း အကုန်အစင် ရေတွက်လျက်ရှိ၏။” ထွက်မြောက်ရာ ၃း၇ မှာ ဝမ်းနည်းနေတာကို ဘုရားသခင် သိတယ်။ ဆာလံ ၅၆း ၈ မှာ“မျက်ရည်တွေကို မှတ်ထားတယ်” ဆာလံ ၁၃၉း ၂ မှာ “အကျွန်ုပ်ထိုင်ခြင်း၊ ထခြင်း အရာတို့ကို သိတော်မူ၏” ဆာလံ ၁၃၉း၂-၆ မှာတော့ အတွေးတွေ အားလုံးနဲ့ အကြံအစည်တွေကို သိနေတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ လူတိုင်းကို ဘုရားသခင် ဒီလောက် စိတ်ဝင်စားနေတယ်ဆိုရင် ကိုယ့်အသက်တာအတွက် တိကျတဲ့ အကြံတော်၊ ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ် ဆိုတာ ယုံဖို့လိုပါတယ်။ “ကောင်းမြတ်သောအရာ၊ နှစ်သက်ဘွယ်သော အရာ၊ စုံလင်သောအရာ တည်းဟူသော ဘုရားသခင် အလိုတော် ရှိသောအရာသည် အဘယ်အရာ ဖြစ်သည်ကို သင်နိုင်မည်အကြောင်း.. ”
(၂ ) ဘုရားအလိုတော် အပေါ် မှန်ကန်တဲ့ သဘောထား ထားဖို့ လိုတယ်။
We must havearight attitude toward God’s will.
“အလိုတော်သို့ လိုက်ချင်သောသူမည်သည်ကား … ဘုရားသခင်၏ ဒေသနာတော် … ဟု ပိုင်းခြားသိလိမ့်မည်။” (ယော ၇း၁၇) ဘုရားအလိုတော်ဆိုတာ သိချင်စိတ် ရှိရုံကလေးနဲ့တော့ သိလာမှာ မဟုတ်ဘူး။ အလိုတော်ဆိုတာ ဘာမှန်း မသိခင်ကတည်းက အလိုတော်အတိုင်း လုပ်ပါ့မယ်လို့ မပြောင်းမလဲတဲ့ ဆုံးဖြတ်မှုရှိဖို့ လိုပါတယ်။
ကျွန်တော့်ဇနီးက “Curtis , ကျွန်မကို တခုလောက် လုပ်ပေးနိုင်မလားဟင်?” လို့ မေးတတ်ပါတယ်။ “အေး လုပ်ပေးမယ်လေ။” လို့ ပြန်ဖြေလေ့ မရှိဘူး။ “ဘာများလဲ?” လို့ ပြန်မေးလေ့ ရှိတယ်။ ဘာမှန်းမသိဘဲနဲ့ လုပ်ပါမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်လေ့ မရှိဘူး။ ဒါပေမယ့် ဘုရားအလိုတော်ကို ဒီလိုသဘောနဲ့ ချဉ်းကပ်လို့ မရဘူး။
တချို့သူတွေက “ကိုယ်တော်၊ လုပ်သင့် မလုပ်သင့် ကျွန်တော် ဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့ အလိုတော်ကို အရင်သိခွင့်ပေးပါ။” ဆိုတဲ့ ပြောမှား ဆိုမှားတာ ပြောတတ်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဘုရားသခင်က “လုပ်မယ်လို့ အရင်ဆုံးဖြတ်ကွာ၊ ဘာလဲဆိုတာ ငါသိခွင့်ပေးမယ်။” လို့ မိန့်တော်မူပါတယ်။
လူငယ်တယောက်က “ဒါပေမယ့် အလိုတော် ဝန်ခံမယ်လို့ ဆက်ကပ်ပြီးမှ၊ ကျွန်တော် မလုပ်ချင်တာတွေကို ဘုရားသခင်က လုပ်ခိုင်းရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ?” လို့ မေးဖူးပါတယ်။
ခဏ စဉ်းစားပြီးမှ “မင်းက ခရစ်တော်ကို တကယ်မှ အားမကိုးဘဲ။ မင်းပြောတဲ့ပုံက မင်းဘဝကို ဘုရားစီစဉ်တာထက် မင်းက ပိုသိနေပုံပဲ။ ဘုရားဖြစ်စေချင်တာထက် ပိုပျော်စရာကောင်းတာ မရှိတော့ဘူး။ ဘုရားဖြစ်စေချင်တာထက် ပိုကောင်းတဲ့အရာလည်း မရှိပါဘူးကွာ” လို့ ဖြေရတယ်။
စာရွက်ဖြူအလွတ် တရွက်ပေါ်မှာ နာမည်ရေး လက်မှတ်ထိုးပြီးမှ “ကိုယ်တော် ရေးလိုက်ပါ။ ကိုယ်တော် ဖြစ်စေချင်တဲ့အတိုင်း လုပ်ပါမယ်” လို့ ပြောတာမျိုး ဖြစ်ရပါမယ်။
၁၉၆၁ မှာ အသင်းတော်ငယ် တပါးကို ဦးဆောင်ခဲ့တယ်။ ဟောပြောမှုရဲ့ရလာဒ်က နည်းနည်းပါးပါးပဲ တွေ့ရတယ်။ ဆာငတ်မှု ရှိတယ်။ အများကြီး ဖြစ်ချင်တယ်။ အသက်ရှင်နေရတာထက် ဘုရားစိတ်တော်နဲ့ ပိုတွေ့ချင်တဲ့စိတ်က များနေတယ်။ အောက်ထပ် အခန်းမှာ မျက်နှာအပ်ပြီးတော့ “ကိုယ်တော်၊ ကိုယ်တော် ဘာဖြစ်စေချင်နေလဲ ကျွန်တော်မသိဘူး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ၊ ကိုယ်တော်အလိုတော်အတိုင်း ကျွန်တော် လုပ်ဆောင်ချင်တယ်။ ဘယ်နေရာ သွားရသွားရ၊ ဘာပဲလုပ်ရ လုပ်ရ၊ ဘာပဲဖြစ်ပါစေ လုပ်ပါမယ်။ အလိုတော် ရှိသမျှမှာ မသိလို့ မလုပ်မိတာမျိုးပဲ ရှိစေရမယ်။ ရှိရင်လည်း အဲဒါ ကျွန်တော့်အမှား မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ်တော့အမှားပဲ ဖြစ်လိမ့်မယ်။” လို့ ဆုတောင်းတာ သတိရမိပါတယ်။
ဒါ စိတ်ပါလက်ပါ ပြောလိုက်တာပါ။ ပြောရုံ ပြောတာကတပိုင်း။ စိတ်ပါလက်ပါ ဆိုတာက တပိုင်းပါ။ အလိုတော် ရှိလျက်နဲ့ ခရစ်တော်အတွက် မလုပ်ချင်တဲ့ အရာတွေ ရှိနေသလား? ဒါဟာ အလိုတော်ကို သိရဖို့ ဆက်ကပ်မှု အပြည့်အဝ မရှိတာပါဘဲ။ “အလိုတော်သို့ လိုက်ချင်သောသူ မည်သည်ကား … ဘုရားသခင်၏ ဒေသနာတော် … ဟု ပိုင်းခြား၍ သိလိမ့်မည်။”
( ၃ ) အပြည့်အဝ ဆက်ကပ်ရမယ်။ There must be an absolute surrender to God.
“ညီအကိုတို့၊ အသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာ၊ သန့်ရှင်းခြင်းလက္ခဏာ၊ ဘုရားသခင် နှစ်သက်တော်မူဘွယ်သော လက္ခဏာနှင့် ပြည့်စုံသောယဇ်ကို သင်တို့သည် ပူဇော်၍၊ မိမိကိုယ်ခန္ဓာကို ဘုရားသခင်အား ဆက်ကပ်ခြင်းတည်းဟူသော သင်တို့ ပြုအပ်သောဝတ်ကို ပြုမည်အကြောင်း၊ ဘုရားသခင်၏ ဂရုဏာတော်ကို ထောက်ထား၍ သင်တို့ကို ငါတိုက်တွန်း နှိုးဆော်ပေ၏။ သင်တို့သည် လောကီပုံသဏ္ဍာန်ကို မဆောင်ကြနှင့်။ ကောင်းမြတ်သောအရာ၊ နှစ်သက်ဘွယ်သောအရာ၊ စုံလင်သောအရာ တည်းဟူသော ဘုရားသခင် အလိုတော်ရှိသောအရာသည် အဘယ်အရာ ဖြစ်သည်ကို သင်နိုင်မည်အကြောင်း၊ စိတ်နှလုံးကို အသစ်ပြင်ဆင်၍ ပုံသဏ္ဍာန် ပြောင်းလဲခြင်းသို့ ရောက်ကြလော့။ ရောမ ၁၂း ၁-၂”
“ကောင်းတဲ့အရာ၊ နှစ်သက်ဘွယ်သောအရာ၊ စုံလင်တဲ့အရာဆိုတဲ့ ဘုရားအလိုတော်ရှိတဲ့အရာကို သိချင်ရင်၊ ကိုယ်ခန္ဓာကို အသက်ရှင်တဲ့ ယဇ်လို ပူဇော်လိုက်၊ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ခရစ်တော်၌ အပ်နှံလိုက်။ ဆက်သလိုက်။ ဘုရားလက်ထဲမှာ တန်ဆာပလာအဖြစ် ထည့်ထားလိုက်” လို့ ရှင်ပေါလု ပြောချင်တာပါ။
ဘုရားအလိုတော် သိချင်ရင် အသုံးပြုခံချင်တဲ့ သဘောရှိနေရမယ်။ ကိုယ့်ဘက်က ဘုရားအတွက် အသင့်ရှိနေမှသာ ကိုယ်က ဘုရားအတွက် တန်ဖိုး ရှိလာမှာပါ။ အသင့်ရှိနေတယ်ဆိုတာက အသုံးပြုခံနိုင်တယ်လို့ ဆိုလိုပါတယ်။ အသက်တာရဲ့ နေရာတိုင်းကို ဖွင့်ဟပြီး အစိတ်အပိုင်းတိုင်းမှာ ဘုရားကို ဦးဆောင်ခွင့် ပေးချင်စိတ် ရှိရပါမယ်။
နိုးထမှုတရားဟောပွဲတွေအတွက် ခရီးသွားနေရတော့ မိုတယ်လ်တွေမှာ နေရချိန် တော်တော်များပါတယ်။ မနက်စာ စားဖို့သွားတော့ တံခါးလက်ကိုင်တွေမှာ “မနှောက်ယှက်ပါနဲ့” ဆိုတဲ့ စာတန်းကလေးတွေ ချိတ်ထားတာ တွေ့မိပါတယ်။ အခန်းထဲက လူက “အပြင်မှာ ဘာလုပ်လုပ်၊ အထဲဝင်မလာနဲ့” လို့ ပြောနေတာပါ။
ယုံကြည်သူ များစွာဟာလည်း အသက်တာရဲ့ နေရာအတော်များများမှာ “မနှောက်ယှက်ပါနဲ့” ဆိုတဲ့ စာတန်းတွေ ဆွဲထားတတ်ပါတယ်။ အသက်တာရဲ့ နေရာ အားလုံးထဲကို ဘုရားသခင် ဝင်လာခွင့်၊ သွန်သင်ခွင့် ပေးဖို့လိုပါတယ်။ စီးပွားရေး လုပ်တဲ့သူကလည်း သူ့စီးပွားထဲမှာ ဘုရား ဦးဆောင်ခွင့် (သို့) အနည်းဆုံးအနေနဲ့ လမ်းညွှန်ချက် သဘောထားတွေ ချမှတ်ခွင့် ပေးရပါမယ်။ အသင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ အသုံးပြု ခံနိုင်ရုံသာမက နှစ်သက်စရာ၊ သဘောကျစရာပါလို့ ဆိုလိုပါတယ်။
ရောမ ၁၂း၁ မှာ “အသက်ရှင်ခြင်း လက္ခဏာ၊ သန့်ရှင်းခြင်း လက္ခဏာ၊ ဘုရားသခင် နှစ်သက်တော်မူဘွယ်သော လက္ခဏာနှင့် ပြည့်စုံသော ယဇ်ကို သင်တို့သည် ပူဇော်၍၊ ” သိသိကြီးနဲ့ ဆက်မှားနေလို့တော့ မဖြစ်ဘူး။ ဆာလံ ၆၆း၁၈မှာ “ ငါသည် စိတ်နှလုံးထဲမှာ ဒုစရိုက်ကို ငဲ့ကွက်လျှင်၊ ဘုရားရှင်သည် နားထောင်တော်မမူ။ ” သိသိကြီးနဲ့ ဆက်လုပ်နေရင်၊ ဘုရားသခင် လမ်းပြမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ အပြစ်ကို အပြီးအပိုင် ရှင်းလင်းတတ်ဖို့ လိုပါတယ်။
အချို့ယုံကြည်သူတွေ အပြစ်ဝန်ချကြပါတယ်။ ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ် ပြန်ပြောတာလို့ ထင်နေကြတယ်။ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘုရားသခင် သိပြီးသားပါ။ ဝန်ခံဖို့ လိုသလို စွန့်ပစ်ဖို့လည်း လိုတာပေါ့။ သုတ္တံ ၂၈း၁၃ မှာ “ မိမိအပြစ်ကို ဝှက်ထားသောသူသည် ချမ်းသာမရ။ မိမိအပြစ်ကို ဘော်ပြဝန်ချ၍ စွန့်ပစ်သောသူမူကား၊ ဂရုဏာတော်ကို ခံရလိမ့်မည်။” သိသမျှအပြစ်တွေကို ဝန်ချတောင်းပန်ပါ။ ကိုယ်ခန္ဓာကို အသက်ရှင်တဲ့ယဇ်၊ သန့်ရှင်းတဲ့ယဇ်၊ နှစ်သက်ဘွယ်ရာယဇ်အဖြစ် ဆက်သပါ။
အသင့်ရှိနေတယ် ဆိုတာဟာ အသုံးခံနိုင်ရုံ၊ နှစ်သက်ဘွယ် ဖြစ်ရုံသာမက၊ ဘယ်လိုထားထား အပြောင်းအလဲ လုပ်လို့ရတဲ့ သဘောရှိပါတယ်။ “ကောင်းမြတ်သောအရာ၊ နှစ်သက်ဘွယ်သောအရာ၊ စုံလင်သောအရာတည်းဟူသော ဘုရားသခင် အလိုတော် ရှိသောအရာသည် အဘယ်အရာ ဖြစ်သည်ကို သင်နိုင်မည့်အကြောင်း” အပြောင်းအလဲရတဲ့ သဘောရှိရပါမယ်။ ဘုရားက တခုခု အလိုရှိနေရင် အပြောင်းအလဲလုပ်လို့ ရနိုင်ရမယ်။
တချို့ မေးကြတယ်။ “အသင်းသား ၇,၉၀၀. ကျော်ရှိတဲ့ ဂျော်ဂျီယာပြည်နယ်က အကြီးဆုံး အသင်းတော်ကြီးကို ဘာကြောင့် ထားခဲ့ရတာလဲ?” တဲ့။ မှားတယ်လို့ တချို့က ယူဆကြတယ်။ မမှားပါဘူး။ ဘုရားသခင်မှာ ကျွန်တော့်အတွက် တခြား အကြံအစည်တခု ရှိနေတာ သိနေတော့ ဆုံးဖြတ်ရတာ သိပ်မခက်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ၁၉၆၁ မှာ ဆုံးဖြတ်ပြီး၊ ဘုရားလုပ်စေချင်တာ လုပ်မယ်၊ သွားစေချင်တဲ့ နေရာသွားမယ်၊ ဖြစ်စေချင်တာတွေ ဖြစ်ရမယ်လို့ သဘောထားလိုက်တာပါ။
မိတ်ဆွေတွေနဲ့တော့ ဝေးရတာပေါ့။ သူတို့ကိုလည်း ချစ်နေဆဲပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဘုရားအလိုတော်မို့ ပျော်ပါတယ်။ Sword of the Lord အမှုတော်မှာ မြတ်နိုးစရာ မိတ်ဆွေသစ်တွေ ဘုရားသခင် ပြန်ပေးပါတယ်။ “ကောင်းမြတ်သောအရာ၊ နှစ်သက်ဘွယ်သောအရာ၊ စုံလင်သောအရာ တည်းဟူသော ဘုရားသခင်အလိုတော် ရှိသောအရာသည် အဘယ်အရာ ဖြစ်သည်ကို သင်နိုင်” ဖို့ဆိုရင်၊ “အသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာ၊ သန့်ရှင်းခြင်းလက္ခဏာ၊ ဘုရားသခင် နှစ်သက်တော်မူဘွယ်သော လက္ခဏာနှင့် ပြည့်စုံသောယဇ်” အဖြစ် ကိုယ်ခန္ဓာကို ပူဇော်ဖို့လိုပါတယ်။ ဥာဏ်မျက်စိ ကြည်လင်ဖို့အတွက် ဆက်ကပ်တဲ့ နှလုံးသားရှိဖို့ လိုပါတယ်။
(၄) သံသယရှိရင်၊ သတိထားပါ။ When in doubt, play safe.
“ယုံသောစိတ်မရှိဘဲ ကျင့်သမျှသော အကျင့်တို့သည် အပြစ်ရှိကြ၏။” (ရောမ ၁၄း၂၃) တခါ- ရောမ ၁၄း၅ မှာတော့ “လူတိုင်း မိမိစိတ်သဘောကျပါစေ။” ဘုရားသခင် လမ်းပြနေပေမယ့် သံသယတချို့ရှိနေရင် သံသယရဲ့ အကျိုးဆက်တွေကို ဘုရားသခင်ထံ အပ်နှံထားလိုက်တာဟာ ဘေးကင်းပါတယ်။
တနင်္ဂနွေမနက် တခုမှာ၊ ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက် Sunday School သွားဖို့ အသင့်ပြင်နေပါတယ်။ အမျိုးသားက “ခင်ရေ၊ ဒီအင်္ကျီ က ပေနေသလားကွာ?” လို့ အော်ပြောတယ်။
အမျိုးသမီးက ပြန်ပြီးတော့လှမ်းပြောတယ်။ “မသိဘူးလေ၊ ဘယ်လိုထင်လို့လဲ?” “အေးကွာ၊ အကောင်းလို့တော့ ထင်ရတာပဲ။”
“စိတ်မသန့်ရင်တော့၊ ပေနေလို့ ဖြစ်မှာပေါ့။” လို့ ဇနီးသည်က ပြန်ဖြေတယ်။
ကျွန်တော့အလုပ် မပြောင်းခင်မှာ အပြည့်အဝစိတ်ချမှု ရှိနေဖို့လိုတယ်လို့ သိခဲ့ပါတယ်။ ကိုယ်က ကျွန်။ ဘုရားသခင်က သခင်။ သခင်ရဲ့အလိုကို ဝေဖန်တာဟာ ကျွန်တယောက်ရဲ့ အလုပ်မဟုတ်ဘူး။ ကျွန်က နာခံဖို့ပဲ။ ရှင်းလင်းတဲ့ အမိန့်ပေးဖို့ကတော့ သခင့်အလုပ်ပါ။
ဘုရားအလိုတော် ရှာတယ်ဆိုတာ ကောက်ရိုးပုံထဲ အပ်လိုက်ရှာတာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ ဘုရားက တခုခုလုပ်စေချင်တယ်။ ဒါကို ရှင်းပြနိုင်စွမ်း ရှိပါတယ်။ တချို့ အကြောင်းအရာတွေမှာ ကိုယ်ကလည်း သံသယရှိ၊ ကျမ်းစာ ဖတ်တော့လည်း ဒီအကြောင်း နားမလည်သေးရင် “အလိုတော်အတိုင်း လိုက်နာပါမယ်။ ဒါပေမယ့် ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာ မရှင်းသေးပါဘူး။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိခွင့်ရရင်၊ အားရဝမ်းသာ လုပ်ဆောင်ပါမယ်။” လို့ ကျွန်တော်တော့ ဆုတောင်းတယ်။ ဘုရားသခင်က အမြဲတမ်း ရှင်းရှင်းသိခွင့်ပေးပါတယ်။ သံသယရှိနေချိန်မှာ သတိထားပါ။
(၅) အဖြစ်အပျက်အပေါ် ငြိမ်သက်ခြင်း ရပြီလား? Do you have peace about the matter?
ကောလောသဲ ၃း၁၅ မှာ “သင်တို့ စိတ်နှလုံးအထဲ၌ ခရစ်တော်၏ ငြိမ်သက်ခြင်း အုပ်စိုးစေ။” “ဘုရားသခင်ရဲ့ ငြိမ်သက်ခြင်းက အဆုံးအဖြတ် ပေးပါစေ”လို့ တချို့က ဘာသာပြန်တယ်။ တချို့ဘာသာပြန်တာကတော့ -- “ဘုရားသခင်ရဲ့ ငြိမ်သက်ခြင်းက သင့်အတွက် ဆုံးဖြတ်သွားပါစေ” လို့ ဆိုတယ်။ ငြိမ်သက်ခြင်း ရပြီလား?
ကျွန်တော်ရဲ့ ဒုတိယမြောက်ကားကို ဝယ်တုန်းက သင်ခန်းစာ တခုရခဲ့ပါတယ်။ ကားတပတ်နွမ်း အရောင်းဌာနမှာ လှပတဲ့ တောက်တောက် ပြောင်ပြောင် Hudson Jet ကားတစီး တွေ့လိုက်ပါတယ်။ ခဏခဏ မြင်ဖူးနေခဲ့တာပါ။ အတွင်းရော အပြင်ပါ သန့်ရှင်းသပ်ရပ်တယ်။ တတ်နိုင်တာထက် ဈေးနည်းနည်း ပိုနေပေမယ့် လိုချင်မိတယ်။ ဝယ်မလို့ကြံတာ ခဏခဏပဲ။ ဒါပေမယ့် စိတ်စနိုးစနောင့် ဖြစ်နေတယ်။ ယူမယ်လို့ ရောင်းသူကို ပြောမယ်ကြံတိုင်း စိတ်ထဲမှာ မသက်မသာ ခံစားနေရတယ်။ ဝယ်ဖို့ ငြိမ်သက်ခြင်း မရှိဘူး။ ဒါပေမယ့် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာ ဆိုပြီး ဝယ်လိုက်တယ်။
အဲဒီကား အဆင်မပြေလောက်ဘူးလို့ မထင်ဘူးလား? တကယ် အဆင်မပြေတာပါ။ လက်ပြောင်းလက်လွှဲ လုပ်ပြီးကတည်းက ကုန်လိုက်တဲ့ငွေ။ စိတ်ညစ်ရတာပေါ့။ သိပ်မကြာဘူး၊ ဝယ်မိတာ မှားပြီလို့ သိလိုက်တယ်။ ပြန်ရောင်းရင် ရောင်း၊ မရောင်းရင်လည်း ပေးလိုက်ရအောင်ကို ဒုက္ခပေးတယ်။
ဘုရားသခင် လမ်းပြနေတယ်ဆိုရင်၊ ငြိမ်သက်ခြင်းပေးမှာပါ။ ငြိမ်သက်ခြင်း မရဘဲနဲ့တော့ ဘာမှမဆုံးဖြတ်တာပဲ ကောင်းပါတယ်။ ဘုရားသခင်ရဲ့ ငြိမ်သက်ခြင်းက အုပ်စိုးနေပါစေ။
( ၆ ) ရပြီးတဲ့ အလင်းထဲမှာ ကျင်လည်ပါ။ Walk in the light you already have.
ယုံကြည်သူရဲ့အသက်တာမှာ ဘုရားအကြံအစည်တော်ကို အကုန်နားလည်တဲ့ အချိန်ရယ်လို့ မရှိပါဘူး။ ခရစ်ယာန်အသက်တာဟာ ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ လျှောက်ရတဲ့ အသက်တာပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း နောက်တဆင့် လှမ်းဖို့အတွက် လုံလောက်တဲ့ အလင်းကို ဘုရားသခင် ပေးလေ့ရှိပါတယ်။ ဆာလံ ၁၁၉း၁၀၅ မှာ “နှုတ်ကပတ်တော်သည် အကျွန်ုပ်ခြေရှေ့မှာ မီးခွက်ဖြစ်၍၊ အကျွန်ုပ် လမ်းခရီးကို လင်းစေပါ၏။”
ရှေ့မှာ မီးအိမ်ပါတဲ့ သတ္တုတွင်း အလုပ်သမားရဲ့ ဦးထုပ်ကို မြင်ဖူးပါသလား? သတ္တုတူးတဲ့သူက တွင်းထဲကို ဆင်းသွားတဲ့အခါ မီးအိမ်က သူ့ရှေ့ ၂၅ ပေကို အလင်းပေးပါတယ်။ သူက “လှိုင်ခေါင်းအဆုံးကို မမြင်ရရင် နောက်တစ်လှမ်း မလှမ်းတော့ဘူးကွာ။” လို့ ပြောမယ် ဆိုပါစို့။ ဒါဆို နောက်တစ်လှမ်း လှမ်းဖြစ်တော့မှာ မဟုတ်တော့ဘူး။ ရပြီးသား အလင်းထဲမှာ ဆက်မလျှောက်ရင် အလင်းရောင် ထပ်ရတော့မှာ မဟုတ်တော့ဘူး။ ဒါပေမယ့် အလင်းထဲမှာ ဆက်လျှောက်ရင် ရှေ့ဆက် အလင်းရနေအုံးမှာပါပဲ။ လျှောက်လေလေ အလင်းရလေလေ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ဒါကြောင့် ယုံကြည်သူဟာ ဆက်လှမ်းနေဖို့ လိုတယ်။ ခရစ်ယာန်ကောလိပ် ကျောင်းသားလူငယ်တွေကို အကြံပေးရဖူးတယ်။ သူတို့က နောင်အနှစ်၂၀ မှာလုပ်မယ့် အလုပ်တွေအတွက် စိုးရိမ်နေကြတယ်။ အချို့ဆိုရင် ဘုရားသခင်က သူတို့ကို သာသနာပြုဆရာလား? ဧဝံဂေလိ ဆရာလား? သင်းအုပ်ဆရာလား? ဘာဖြစ်စေချင်တယ်ဆိုတာ မသေချာ၊ မရေရာဘူး ဖြစ်နေတယ်။
“အပြည့်အဝ ဆက်ကပ်ပြီးတော့ ဘုရားသခင်အတွက် အသင့်နေပါ။ အလိုတော်ကို သိခွင့်ပေးပါလိမ့်မယ်။ အခုတော့ အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင် ကြိုးစားပါ။ ကျောင်းမှာပဲ ဆက်နေပြီး အပြင်းအထန် လေ့လာပါ။ နောက်တစ်ပတ် သောကြာနေ့ စာမေးပွဲကို အောင်အောင်ဖြေပါ” လို့ အမြဲတမ်း အကြံပေးရပါတယ်။
ရပြီးတဲ့ အလင်းမှာ ကျင်လည်ပါ။ အလင်းကို ထပ်ပေးအုန်းမှာပါ။ ပေတရု ထောင်ကျနေတုန်းက သံတံခါးကြီးနားကို သူ လျှောက်မသွားမချင်း၊ တံခါးပွင့်သွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး၊ (တမန် ၁၂း၁၀)။
ဒီနေ့အတွက် ဘုရားအလိုတော်ကို မဆောင်ရွက်ဘဲနဲ့ နောက်တစ်ပတ်အတွက် အလိုတော်ကို ပြဖို့ မမြှော်လင့်ပါနဲ့။ ရှေ့ရေးကို ပြေးမြင်တတ်ဖို့ ကြိုပြထားတဲ့ အချိန်တွေ ရှိတတ်ပါတယ်။ လူတချို့ဟာ အခြားလူတွေထက် အဝေးကြီးကို ကြိုမြင်နိုင်စွမ်း ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ယုံကြည်သူတိုင်းအတွက် နောက်တစ်လှမ်း လှမ်းဖို့ လုံလောက်တဲ့ အလင်းကို ပေးပါတယ်။
( ၇ ) ကိုယ့်ဆန္ဒက အလိုတော် သိအောင် ကူညီပါစေ။ Let your desires Help Determine God’s Will.
ဖိလိပ္ပိ ၂း၁၃မှာ “အကြောင်းမူကား၊ သင်တို့သည် အလိုရှိစေခြင်းငှါ၎င်း၊ အကျင့် ကျင့်စေခြင်းငှါ၎င်း၊ သင်တို့အထဲ၌ စေတနာတော် အားဖြင့် ပြုတော်မူသောသူကား ဘုရားသခင်ပေတည်း။”
အသက်တာကို ခရစ်တော်ထံ အပ်နှံရင် မှန်ကန်တဲ့ အလိုဆန္ဒကို ပေးတော်မူပါတယ်။ ဆာလံ ၃၇း၎ “ထာဝရဘုရား၌ မွေ့လျော်ခြင်း ရှိလော့။ သို့ပြုလျှင်၊ စိတ်နှလုံးအလို ပြည့်စုံရသောအခွင့်ကို ပေးတော်မူမည်။”
ဘာလုပ်ရမှန်း မသိရအောင် အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေ ဆုံးဖြတ်ရဖူးပါတယ်။ လုပ်ချင်တာတော့ သိတယ်။ ဒါပေမယ့် မှားလား၊ မှန်လား မသေချာဘူး။ ကိုယ့်ဆန္ဒနဲ့ ဘုရားအလိုတော် တစ်ထပ်ထဲ ဖြစ်စေဖို့ ဆုတောင်းရတယ်။ ဒါကြောင့် တခုခုလုပ်ချင်လာတဲ့အခါ ဘုရားအလိုတော် သိရဖို့ ရုန်းကန်နေစရာ မလိုတော့ဘူး။ ဖိလိပ္ပိ ၂း၁၃ ကို ခဏခဏ ဖတ်ရတယ်။ “အကြောင်းမူကား၊ သင်တို့သည် အလိုရှိစေခြင်းငှါ၎င်း၊ အကျင့်ကျင့်စေခြင်းငှါ၎င်း၊ သင်တို့အထဲ၌ စေတနာတော်အားဖြင့် ပြုပြင်တော်မူသောသူကား ဘုရားသခင်ပေတည်း။” စိတ်ဆန္ဒကို နားလည်နိုင်ခွင့် ပေးပါတယ်။ ဘုရားအလိုတော်ရှိတာကို လုပ်ရတဲ့အခါ ပျော်ရွှင်မှုတွေ၊ ကျေနပ်မှုတွေ ပေးပါတယ်။
(၈) သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်က လမ်းပြပေးနိုင်ပါတယ်။ The Holy Spirit is Able to Guide Us.
ရောမ ၈း၁၄ မှာ “ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော် ဆုံးမပဲ့ပြင်တော်မူသမျှသော သူတို့သည် ဘုရားသခင်၏သားဖြစ်ကြ၏။”
အတော်များများ အကြောင်းအရာတွေက ကျမ်းစာအားဖြင့် ရှင်းပြီးသာပါ။ ဒါတွေကို ထပ်မေးစရာတော့ မလိုဘူးပေါ့။ ဘုရားအလိုတော်နဲ့ ဘုရားစကား၊ ကျမ်းစာဟာ အမြဲတမ်း တစ်ထပ်တည်းပါပဲ။ ဆန့်ကျင်၊ ကွဲလွဲလေ့မရှိပါဘူး။ ဝိညာဉ်တွေကို ကယ်တင်ဖို့ဆိုတာ ဘုရားအလိုတော်မှန်း သိပြီးသားပါ။ ဒီအတွက် ထွေထွေထူးထူး စောင့်နေစရာ၊ ဆုတောင်းနေစရာ မလိုပါဘူး။ မာကု၁၆း၁၅ မှာ “သင်တို့သည် လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ် ရှိသမျှသို့သွား၍ ဝေနေယျသတ္တဝါ အပေါင်းတို့အား ဧဝံဂေလိတရားကို ဟောကြလော့။” ယောဟန် ၁၅း၁၆ မှာ သခင်ယေရှုက “သင်တို့သည် ငါ့ကို ရွေးကောက်ကြသည် မဟုတ်။ ငါသည် သင်တို့ကို ရွေးကောက်သဖြင့်၊ သင်တို့သည်သွား၍ တည်ကြည်သောအသီးကို သီးမည်အကြောင်းနှင့် ငါ့နာမကိုအမှီပြု၍ ခမည်းတော်မှာ ကောင်းသမျှတို့ကို ရမည်အကြောင်း သင်တို့ကို ငါခန့်ထား၏” ဝိညာဉ်တော်ရဲ့လမ်းပြမှုကို ထူးထူးခြားခြားမရလို့ ဆိုပြီး ဝိညာဉ်ကယ်တင်ဖို့ ငြင်းတာဟာ ကျမ်းစာရဲ့ ရှင်းနေတဲ့အမိန့်အပေါ် မနာခံမှု ထင်ရှားနေတာကို ဖုံးကွယ်ဖို့ ကြိုးစားတာပါပဲ။
အပြစ်သားတွေရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်း စဉ်းစားကြည့်ပါ။ ကျမ်းစာပြောတာ ရှင်းပါတယ်။ ၂ပေ ၃း၉ မှာ ဘယ်သူ့ကိုမှ မပျက်စီးစေချင်ဘူး။ နောင်တရဖို့ အလိုတော်ရှိပါတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဆယ်ဘို့တဘို့ ပေးဖို့လည်း ထူးထူးခြားခြား လမ်းပြဖို့မလိုပါဘူး။ ဝတ်ပြုရာ ၂၇း၃၀ မှာ “ဆယ်ဘို့တဘို့သည် ထာဝရဘုရား၏ ဘဏ္ဍာတော်ဖြစ်၏။” ဝင်ငွေရဲ့ ဆယ်ဘို့တဘို့ဟာ ဘုရားပိုင်တယ်ဆိုတာ သိပြီးသားပဲ။ ဘယ်မှာပေးသင့်သလဲ ဆိုတာပဲ အဖြေရှာသင့်ပါတယ်။ ကျမ်းစာက ပြောပြီးသားမို့ ပေးရမလား၊ မပေးရဘူးလား ဆိုတာတော့ မေးနေစရာမလိုပါဘူး။
ကျမ်းစာထဲမှာ ပြောမထားတာတွေတော့ ရှိပါသေးတယ်။ ဥပမာ ဘယ်အသင်းတော်မှာ ပါဝင်ရမလဲဆိုတာ ကျမ်းစာက မပြောပါဘူး။ “ဒီမြို့- ဒီမြို့က နှစ်ခြင်းအသင်းတော်မှာ ပါဝင်ရမယ်လို့ ပြောမထားဘူး။ ဒါကြောင့် ဘုရားရွေးတဲ့ အသင်းတော်ကို ပြဖို့ ဆုတောင်းဖို့ လိုလာပါတယ်။ ဘုရားကျောင်း မှန်မှန်တက်သင့်ပါတယ်။ ဟေဗြဲ၁၀း၂၅ မှာ “လူအချို့တို့၏ ထုံးစံရှိသည်အတိုင်း၊ အချင်းချင်း စည်းဝေးခြင်းအမှုကို မရှောင်မလွဲကြနှင့်။” ဒါပေမယ့် ဒီကျမ်းချက်က ဘယ်ဘုရားကျောင်းမှာ သွားတက်ရမယ်လို့ မပြောပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဆုတောင်းဖို့ လိုလာပါတယ်။ ကျမ်းစာပြောတာ ရှင်းနေရင်တော့ ဝိညာဉ်တော်ရဲ့လမ်းပြမှုကို စောင့်နေစရာ မလိုတော့ဘူး။
ဘယ်ယောက်ျားကလေးကို အိမ်ထောင်ပြုရမယ်လို့ ကျမ်းစာက ပြောမထားသလို၊ ဘယ်မိန်းကလေးကို လက်ထပ်ရမယ်လို့လဲ ပြောမထားပါဘူး။ သူတို့အနေနဲ့ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့လမ်းပြမှုကို တောင်းခံဖို့ လိုလာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျမ်းစာက ၂ကော၆း၁၃ မှာ “မယုံကြည်သောသူတို့နှင့် တွဲဖက်၍ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သော ထမ်းဘိုးကို မထမ်းကြနှင့်။ တရားသောအမှုသည် မတရားသောအမှုကို အဘယ်သို့ လက်ခံနိုင်မည်နည်း။ အလင်းသည် မှောင်မိုက်နှင့် အဘယ်သို့ ဆက်ဆံနိုင်မည်နည်း။” ဒါဟာ လမ်းညွှန်ချက်ပါ။ ခရစ်ယာန်ဆိုရင်၊ ခရစ်ယာန်မဟုတ်တဲ့သူကို လက်မထပ်ရဘူး။ ဒါပေမယ့် ခရစ်ယာန်မိန်းကလေးတွေ အများကြီးရှိနေတော့၊ ယောက်ျားလေးအနေနဲ့ အမှန်ဆုံးတယောက် (the right one) ကို ရွေးချယ်ဖို့ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ လမ်းပြမှုကို မျှော်လင့်နိုင်ပါတယ်။ ဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်က ဘုရားရဲ့စကားတော်နဲ့ မကွဲလွဲပါဘူး။ ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်မနေဘူး။
မိန်းးမပျိူတစ်ယောက်က ပြောတယ် “ကျွန်မ လူတစ်ယောက်နဲ့ ချစ်နေပြီ။ သူနဲ့လက်ထပ်တော့မယ်။”
ဒါပေမယ့် “ဒီအကြောင်း ဆုတောင်းပြီးသားပါ။ ဘုရားအလိုတော်ရှိတယ်လို့ ကျွန်မသိပါတယ်။” လို့ မိန်းမပျိူက ပြောတယ်။
“ညီမ၊ ဘုရားက သူ့စကားနဲ့ ဆန့်ကျင်ပြီး လမ်းပြလေ့မရှိဘူး။”၂ကော ၆း၁၄ မှာ “မယုံကြည်သောသူတို့နှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သော ထမ်းဘိုးကို မထမ်းကြနှင့်။” လို့ ပြောတယ်။
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်စကား သူနားမထောင်ဘဲ အဲဒီလူကို လက်ထပ်လိုက်တယ်။ ပြောရမှာ စိတ်မကောင်းစရာပါ။ အခုတော့ သူ့ခမျာ သနားစရာ ဖြစ်နေပြီ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောရရင် အတော်များများ အကြောင်းအရာတွေက ဘုရားစကားတော်ထဲမှာ ပြောပြပြီးသားပါ။ ဒါပေမယ့် ကျမ်းစာက အသေးစိတ် မပြောတဲ့အခါ အလိုတော်ပြဖို့ မြှော်လင့်ခွင့် ရှိပါတယ်။
ဘုရားအလိုတော်ဟာ မလိုအပ်ဘဲ ပြောင်းလဲလေ့မရှိပါဘူး။ ဘုရားအလိုတော်ကို လုပ်ဆောင်ဖူးကောင်း၊ လုပ်ဆောင်ဖူးမှာပါ။ အောင်မြင်မှုဆိုတာ ဘုရားအလိုတော်ကို သိပြီး အလိုတော်အတိုင်း ဆောင်ရွက်လိုက်ခြင်းပါ။ ။
Posted by Papa at 12:30 AM